China 5T flake ice umatshini mveliso kunye nabathengisi | Iinkqubo zeHerbin Ice
I-5T yomatshini weqhwa
I-5T / umatshini weqhwa oshushu wokwenza iitoni ezi-5 zamaqhekeza omkhenkce yonke imihla, ngaphakathi kweeyure ezingama-24
Sibonelela nge-5T / ngemini yomatshini weqhwa. Umgangatho ophezulu kunye newaranti yonyaka emi-2. Sizinikezela kwimishini yomkhenkce ukusukela ngo-2009, kwaye oomatshini bethu bagubungela uninzi lweemarike zaseYurophu nezaseMelika. Silindele ukukunikezela ngenkonzo yethu ezinzileyo kunye nokonga umbane ngeteknoloji.
1. Umkhenkce owenziwe ngumatshini wethu womkhenkce we-5T / ngemini.
Amacwecwe omkhenkce enziwe ngoomatshini bethu beqhwa abanyibilikisiweyo ngumgangatho wokusebenza okupholileyo. Amacwecwe omkhenkce ajiyile kwaye omile.
Kujikeleze iitoni ezi-5 zeli qhwa liphezulu linokwenziwa yonke imihla ngaphakathi kweeyure ezingama-24, kwaye nokuba ngumkhenkce kwimveliso yemihla ngemihla kusekwe kumaqondo obushushu angama-30C, kubushushu bamanzi obungama-20C.
Uluhlu lobungakanani bomkhenkce luphakathi kwe-1.5-2.3mm. Kwaye ubukhulu bomkhenkce buhlengahlengiswa.
Amaqhekeza omkhenkce anjalo asetyenziselwa ukubanda kweentlanzi, ukugcina ukutya kucocekile, ukwenziwa kokutya, ukupholisa ikhonkrithi, kwibhodi yokomisa iintlanzi, ukusetyenziswa kwemichiza njalo njalo.
Zenziwe ngoomatshini bokugcina umbane obugciniweyo ngombane, kunye nokusetyenziswa kwamandla ukwenza itoni nganye ye-ice flakes yi-75KWH kuphela.
2. Iinkcukacha ye I-5T / imini yomatshini weqhwa.
Amandla ethu omatshini weqhwa e-5T / ngosuku asekwe kubushushu be-30C kunye ne-20C kubushushu bamanzi. Kwimeko yokusebenza esemgangathweni, inokwenza i-5 yeetoni zamaqhekeza emihla ngemihla, ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Ixhotywe nge-evaporator yesilivere, eneyona ndlela ihamba phambili yokuhambisa ubushushu. Ukutshintshwa kobushushu phakathi kwamanzi kunye nefriji kungenziwa ngokufanelekileyo. Ngesi sizathu, lo matshini weqhwa we-5T / wosuku utya kuphela i-375KWH yombane yokwenza iitoni ezi-5 zamaqhwetha omkhenkce. Omnye umatshini weqhwa we-5T / we-flake wase-China usebenzisa ubuncinci i-525 KWH yombane yokwenza iitoni ezi-5 zamaqhwa. Umahluko wokusetyenziswa kombane mihla le yi-150KWH.
Kwiminyaka eli-10, umahluko uyakuba yi-547500 KWH yombane. Sibala ngokusebenzisa i-150x365x10 = 547500.
Khetha umatshini wam weqhwa we-5T / wosuku, uya kuhlawula imali encinci kwityala lombane ngokonga i-547500 KWH yombane kwiminyaka eli-10.
I-80% yamacandelo kumatshini weqhwa we-5T / wosuku ngumatshini weqhekeza odumileyo. Kwiicompressors, sikhetha phakathi kweBitzer, GEA Bock, Frascold, Refcomp, njalo njalo. Kwinqanawa zoxinzelelo, ezinje ngokwahlulahlula ioyile, ukwamkelwa kolwelo njalo njalo, sikhetha i-Emerson okanye i-O & F, ezizezona zidume kakhulu kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo eziphezulu zefriji esemgangathweni. Ngeli xesha, iivelufa zeDanfoss, abalandeli beZiehl-Abegg, iinxalenye zombane weSchneider, njalo njalo zisetyenziswa koomatshini beqhwa beqhwa aba-5T / ngemini.
Nantsi eminye imifanekiso kwizinto ezithile kunye neenkcukacha kumatshini wethu we-5T / wosuku lomkhenkce.
3. Ipharamitha ye I-5T / imini yomatshini weqhwa.
1 Iparameters Iinkcukacha
2 Ubushushu obuqhelekileyo obuqhelekileyo 30 ℃
3 Iqondo lobushushu emanzini 20 ℃
4 Ubutyebi bamanzi Amanzi amatsha
5 Ukunikezwa Amandla 400V / 4P / 50Hz
6 Imeko yokusebenza Umoya owaneleyo
7 Umzekelo Isixhobo seHBF5T-R4W
8 Isikhenkcisi R404a
9 Umthamo wemveliso yemihla ngemihla yomkhenkce Iitoni ezintlanu zomkhenkce ngaphakathi kweeyure ezingama-24
10 Umthamo wefriji 25.3KW
11 Ubushushu bumphunga Thabatha 18 ℃ - thabatha 20 ℃
12 Ubushushu bomkhenkce weflake Apha ngezantsi -5 ℃
13 Ukutyeba komkhenkce 1.8-2.2mm
14 Ukusetyenziswa kwamandla kokwenza umkhenkce 75KWH yokwenza itoni enye yomkhenkce
15 Ingxolo 78dBA ngaphakathi kweemitha ezi-2
16 Amandla abalekayo kumatshini opheleleyo 15.625KW Ukonga umbane !!!
18 Impompo yokupholisa inqaba yamanzi kunye nemoto ye fan 1.5 + 0.55 = 2.05KW
19 Isitshisi sokufudumeza ubungakanani bamanzi 100KW
20 Nciphise umsiki womkhenkce kwi-evaporator 0.55KW
21 Impompo yokuhamba kwamanzi kwi-evaporator I-0.12KW
22 Inkqubo yolawulo Inkqubo yolawulo lwePLC
23 Ukuxinana kweqhwa 900 ~ 950kg / m3
24 Ubunzima bomatshini weqhwa 1500kgs
25 Ubukhulu bomatshini womkhenkce we-flake I-LxWxH = 2300x1900x1800mm
26 Abanye ......
4. Umzobo wesi-5T / ngemini yesityalo somkhenkce esisezantsi.
Abathengi abaninzi bangathanda ukukhetha i-5T / imini yomatshini weqhwa osebenza kunye negumbi elinye le-3T kunye. Ikwangumgangatho wethu we-5T / ngosuku lwesityalo somkhenkce.
Umatshini womkhenkce we-5T / wosuku ubekwe ngaphezulu kwegumbi le-3T lomkhenkce.
Igumbi lomkhenkce lenziwe ngeepaneli ezifakwe kwiqondo lobushushu kunye nobukhulu be-100mm, kwaye amagqabi omkhenkce anokugcinwa ngaphakathi ngaphandle kokunyibilika ixesha elide. Amagqabantshintshi e-Ice ngokuzenzekelayo awela kwigumbi lomkhenkce.
Igumbi elinomkhenkce elingu-3T linokugcina iitoni ezi-3 zamakhekhenkce, kwaye oko kwanele ukugcina onke amaqhekeza omkhenkce enziwe ngexesha lasebusuku ngumatshini weqhwa we-5T / ngosuku.
Kuloo mzobo, ungabona inqaba yokupholisa amanzi ecaleni komatshini womkhenkce. Isetyenziselwa ukukhulula ubushushu kwi-ice system. Inqaba yokupholisa amanzi iyacetyiswa ukuba ibekwe kwindawo evulekileyo, njengaphezulu kwesakhiwo, ngaphandle kwesibonelelo njalo njalo. Amanzi apholileyo ayilwe ayacetyiswa ukuba asebenze kwiindawo ezishushu.
Ubungakanani begumbi lomkhenkce lingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Ngaphandle kwento yokupholisa amanzi, sinokuxhobisa umatshini ngezixhobo zokupholisa umoya + iifeni zokupholisa umoya. Kwaye siya kuyila inkqubo ngokobushushu bendawo yomsebenzisi ephezulu kunye neyona isezantsi.
5.Ikamva lemveliso kunye nokusetyenziswa komatshini womkhenkce we-5T / wosuku.
Amaqhekeza omkhenkce owomileyo kunye nekhenkce ngokusebenza okupholileyo. Amacwecwe omkhenkce angasetyenziselwa ukuqhwaba ukutya kwaselwandle, ukugcina ukutya kucocekile, ukulungiswa kokutya, ukupholisa ikhonkrithi, ukukhwela iintlanzi ebhodini, ukusetyenziswa kwemichiza njalo njalo.
6.Ukuhanjiswa, ukuthunyelwa, inkonzo kunye newaranti yomatshini womkhenkce we-5T / wosuku.
Isikhongozelo esinye seenyawo ezingama-20 sanele ngaphezulu kwe-5T / ngosuku olunye lwesityalo somkhenkce, kubandakanya i-5T / imini yomatshini weqhwa, igumbi lomkhenkce, ifreyim yentsimbi yokuxhasa umatshini womkhenkce kunye nonyana.
Sinikezela ngenkonzo yokubonisana ekwi-intanethi simahla kubomi bomatshini ixesha elide. Sinikezela ngezinto simahla nge-DHL ukuba izinto zomatshini zinengxaki esemgangathweni ngaphakathi kwewaranti.
Iwaranti yomkhenkce we-flake ice evaporator yiminyaka engama-20, siyathembisa ukuba i-evaporator ayinakho ukuvuza kwerhasi, akukho malformation phakathi kweminyaka engama-20.
Iminyaka emi-3 yeyokuqinisekisa i-Motors, iimpompo, iibheringi, iifeni, izinto zombane kunye nezinye izinto ezihambayo.
Iminyaka eli-15 yilewaranti yemikhumbi yoxinzelelo, i-condenser, i-compressor, i-valves njalo njalo.
7. I-FAQ malunga ne-5T / imini yomatshini weqhwa.
Q: Yimalini nge-5T / ngosuku lwesityalo somkhenkce?
A: Ixabiso le-5T / day flake ice plant liphakathi kwe-USD 13500 ne-USD 20000.
Amaxabiso axhomekeke kuluhlu lwecandelo lomatshini kunye nobungakanani begumbi lomkhenkce. Amaxabiso asekwe kwi-FOB SHENZHEN USD, kwaye awabandakanyi iindleko zothutho. Umthengi kufuneka ahlawule ngokwabo iimpahla.
Q: Uthini umahluko phakathi komatshini wethu womkhenkce we-flake kunye nomnye umatshini weqhwa wase-China?
A: Umahluko omkhulu kwitekhnoloji yethu yokugcina amandla.
Sisebenzisa i-Chromed sliver alloy ukwenza i-evaporator yeyona ndlela ihamba phambili kunye neyona ndlela ifanelekileyo yokuqhuba ubushushu.
Kwimeko efanayo yokusebenza, umatshini wam weqhwa we-5T / wosuku usebenzisa i-375KWH yombane yonke imihla, ngelixa abanye oomatshini besiqhwa baseTshayina betya ubuncinci ama-525KWH emihla ngemihla.
Yonke imihla, umahluko ngu-150KWH wombane.
Kwiminyaka eli-10, umahluko ngowama-547,500 KWH yombane.
Kwiminyaka engama-20, umahluko yi-1,095,000 KWH yombane.
Iindleko zakho ezinkulu zokwenza umkhenkce ngumbane. Isitshixo seshishini lomkhenkce eliyimpumelelo nelizuzisayo bubuchwephesha bokugcina amandla kumatshini.
Ngetekhnoloji yam yokonga umbane, ungayandisa inzuzo yakho yomkhenkce ngokuhlawulisa imali encinci yombane.
Ngobuchwephesha bam bokugcina amandla, ungathengisa umkhenkce ngexabiso eliphantsi kunabo ukhuphisana nabo, kwaye kungekudala ungabagxotha abo ukhuphisana nabo ngaphandle kwintengiso.
Ngaphezu koko, sinesixhobo esongezelelweyo sokukunceda ukonga umbane.
Masiyibize ngokuba sisigcini-mbane. Amaza ombane angenamsebenzi / angasebenziyo anokuhluzwa ngesigcini samandla, ke ngoko, inokucutha ukusetyenziswa kwenkqubo yonke nge-5% -8%.
Ixabiso lesoseji yamandla liqala ukusuka kwi-USD 3000 / iseti, kwaye kuxhomekeke kumandla efakiweyo ewonke enkqubo.
I-USD 3000 lixabiso le-5T / yosuku olusindisa umbane wesityalo.
I-10T / ngemini yomatshini weqhwa
I-15T / ngemini yomatshini weqhwa
I-20T / imini yomatshini weqhwa
I-25T / imini yomatshini weqhwa
I-30T / imini yomatshini weqhwa
Oomatshini abakhulu beqhwa
Egqithileyo 0.6T ityhubhu umatshini ice
Okulandelayo: 30T isakhelo somatshini weqhwa
3T umatshini flake ngumkhenkce
20T esisangqa umatshini ice
2T flake umatshini ngumkhenkce
30T isakhelo somatshini weqhwa
Umatshini weqhwa elingu-10T